नेपाल आइडल टप – ३ को नतिजा, फालिने भए निशान भट्टराई ! • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
नेपाल आइडल टप – ३ को नतिजा, फालिने भए निशान भट्टराई !
काठमाडौ । एपी वान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै गरेको चर्चित रियालिटी टिभी शो नेपाल आइडलमा बाँकी रहेका चार प्रतिस्पर्धीहरुमध्ये बाट अब तीन जना मात्र ग्रान्ड फिनालेका लागि छानिने छन् । एक जना प्रतिस्पर्धी बाहिरीने निश्चित भएको छ । तीनै जनाले नगद रकमसहित अन्य पुरस्कार पाउँदैछन्। ग्रान्ड फिनाले असोज ६ गते कतारको दोहामा हुँदैछ। त्यसका लागि दुई हप्ता बाँकी छ। पर्सि एक प्रतियोगी बाहिरिएपछि ग्रान्ड फिनाले अगाडिका दुई हप्ता कस्तो कार्यक्रम प्रसारण हुने हो, स्पष्ट छैन।
आइडल सिरिजमा विदेशमा भएका कार्यक्रमहरुमा वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीका रुपमा बाहिरिसकेका प्रतियोगीहरुलाई फेरि प्रवेश गराउने गरिए पनि नेपाल आइडलमा अहिलेसम्म त्यसको प्रयोग भने भएन। टप थ्रीमा पुग्नबाट वञ्चित को होला त ?
बुद्ध लामालाई अहिलेसम्म धेरै भोट आएको देखिन्छ। उनी अहिलेसम्म गत साता एक पटक मात्र डेन्जर जोनमा (कम भोट आएका आधारमा बटम थ्रीमा) परेको देखिन्छ ।
प्रताप दासलाई सबैभन्दा कम भोट आएको देखिन्छ। उनी चार पटक डेन्जर जोनमा परेका थिए भने त्यसमध्ये तीन पटक त कम भोट ल्याउने दुई जनामा परेको देखिन्छ। कम भोट ल्याउने दुई जना मध्ये अर्को प्रतिस्पर्धीले उनीभन्दा कम भोट ल्याएकोले तीन पटक उनी बचेका हुन्। त्यस्तै निशान भट्टराई दुई पटक डेन्जर जोनमा परिसकेका छन्। त्यसमध्ये एक पटक त उनी बटम टुमा नै परेका छन्। सागर आले भने अहिलेसम्म एक पटक मात्र डेन्जर जोनमा परेका छन्। उनी बटम टुमा परेको रेकर्ड छैन। अदालतको आदेश बमोजिम पछिल्लो हप्ता भोट आह्वान गरिएको छैन । अघिल्लै हप्ताका भोटबाट अब नेपाल आईडल छानिने निर्णय भइसकेको छ । यस आधारमा अब निशान भट्टराईले कमजोर भोटका कारण दुखद विदाई भोग्नुपर्ने देखिन्छ ।